JOS Nepal » पुल्चोकबाट ज्ञानेन्द्र शाही प*क्राउ-प्रेसमिटमै कुटा*पिट,इन्स्पेक्टर गरे यस्तो खुलासा,भयो भागाभाग !
पुल्चोकबाट ज्ञानेन्द्र शाही प*क्राउ-प्रेसमिटमै कुटा*पिट,इन्स्पेक्टर गरे यस्तो खुलासा,भयो भागाभाग !
काठमाडौं – पुल्चोकबाट ज्ञानेन्द्र शाही प*क्राउ-प्रेसमिटमै कुटा*पिट, ज्ञानेन्द्र शाही ले यो पत्रकार प्रेसमिट हो पत्रकार लाई मात्र बोलाईको हो । कुनै विद्यार्थी लाई बोलाए को होइन, भन्दै गर्दा शाही र प्रचण्ड को नाम आउदा बिबाद भएको देखिन्छ ।
खास पत्रकार समेलन राख्नु नेपालगन्ज एर्पोट काण्ड को विशेय मा थियो। इन्स्पेक्टर गरे यस्तो खुलासा, भयो भागाभाग हामी समाजमा, देशमा घटेका बिभिन्न घटनाहरुलाई सत्य र निस्पक्क्ष ढंगले तपाई हरु सामु सामजिक online सन्जाल मार्फत ल्याउने छौं ।
साथै तपाई संग अनौठो कला र दुख पिडामा परेको छ भने सम्पर्क: हाम्रो (जन्तरे online सेरोफेरो) फेसबुक पेजमा हामी लाई मासेज मा गएर सम्पर्क गर्नुहोला । धन्यवाद जन्तरे Online सेरोफेरो TV www.josnepal.com नयाँ-नयाँ भिडियो हरु हेर्नका लागी हाम्रो च्यानल लाई subscribe गर्नुहोला |